अबको चुनावमा ओली एमालेले एक सिट झुक्कियर जित्यो भने पनि म राजनीतिबाट सन्यास लिन्छु : माधव नेपाल – Points Nepal
अबको चुनावमा ओली एमालेले एक सिट झुक्कियर जित्यो भने पनि म राजनीतिबाट सन्यास लिन्छु : माधव नेपाल
प्रकाशित मिति: बिहिबार, माघ २७, २०७८ समय: १४:०१:४३
नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले राष्ट्रियसभाको सबै सिटमा पाँच दलीय गठबन्धनले जित हाँसिल गर्ने दाबी गरेका छन् । बुधबार पार्टी कार्यालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै नेपालले राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा १९ सिट नै सत्तारुढ गठबन्धनहरूले जित्ने दाबीसमेत गरे ।
ओली एमालेले एक सिट कतै जित्यो भने म राजनीति बाटै सन्यास लिन्छु पनि भने | उनले निर्वाचनको नतिजाले राष्ट्रिय रुपमै तरंग सिर्जना गर्ने बताए । “ राष्ट्रियसभामा अहिले उठाईएका जम्मै ठाउँमा हामी जित्छौं, विजयी हुनेछौं”, उनले भने, “त्यो परीणामले पनि एउटा तरंग पैदा गर्नेछ ।”
एक अर्को प्रसंगमा बोल्दै उनले तीन तहको निर्वाचन एकै पटक हुनुपर्ने बताए । एकै चरणमा चुनाव गर्न सके झण्डै आधा खर्च जोगिने उनको भनाइ थियो ।
“तपाईँहरू सुनिरहनु भएको छ कि स्थानीय तहको चुनाव कहिले गर्ने, संघीय चुनाव कहिले गर्ने ? प्रदेशसभाको चुनाव कहिले गर्ने ? यस बारेमा व्यापक बहस भइरहेको छ । यो बहसको सन्दर्भमा हाम्रो धारणा संविधानलाई सर्वोपरि राखेर, कानुन अनुरूप नै चुनाव सम्पन्न हुनुपर्छ । यसो गर्दा एकै पटकमा तीन वटा नै तहको निर्वाचन गर्न सकियो भने राम्रो हुन्छ ।”,
उनले भने, “यो भन्दा पहिला ५ चरणमा चुनाव भएको थियो । त्यसमा झन्डै २५ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो । यदि एकै चरणमा गर्ने हो भने ५ देखि १० अर्बमा चुनाव सकिन्छ । उम्मेदवारको पनि खर्च कम हुन्छ । त्यसका निम्ति हामी छलफल चलाइरहेका छौँ ।”
बुधबार निर्वाचन आयोगमा हुने सनाखतका क्रममा नेता झलनाथ खनालले दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासमार्फत वारिसनामा पठाउने भएका छन्। चुँडाल र नेपाल पनि बुधबार सिधै निर्वाचन आयोगमा आउने जानकारी साहले दिएका छन्। News parda bata
Last Updated on: February 10th, 2022 at 2:01 pm